Apple, Amazon, Google na agba oso okacha mma amamighe echiche software - Tekedia
Home Latest Insights | News Apple, Amazon, Google na agba oso okacha mma amamighe echiche software
Apple, Amazon, Google na agba oso okacha mma amamighe echiche software
May 28, 2017 | by	Ndubuisi Ekekwe | 8
Apple Inc. gbara mbo ibu ulo oru nke mbo wetara amam?ghe echiche software na afo 2011 mgbe ha webatara Siri. Siri na-eme ihu na amamighe nke mmadu na-eme ga-abu nke igwe ekwenti ga na emezi.
Ulo orua nke di na America na-agbo mbo ihu na igwe amamighe echiche na eto na-mmuta. Apple webatara processor ohuo ubochi gara aga.
Engineers na aru oru na Apple na agbo mbo ihu otu has ga ezi noro ni’ihu Amazon.com. Ndi okwu mmuta na-ekwu si na amaghihe echiche igwe ga-abu ihe ga eweta ego. Siri bu uzo puta, kama Amazon.com no zi n’ihu ugbua. Ha webara Alexa.
Apple no na Cupertino, California weputara processor ohuo. Ha choro igi ya ruputa ekwenti ohuo ga-eme ka Siri na-alu olu karia Alexa.
Google Inc na-agba kwa oso ahia ebe a. Ha weputara Igwe nke ha ana akpo Home Assistant. Google na mbido but ulo oru di egwu na ihe gbasara amamighe echiche software. Google weputara igwe echiche di egwu Google Search nke ha gi rie ego na uwa nile. Kama, mgbe obu igi okwu gwa igwe komputa okwu, Amazon.com bu si igwe n’ihu. Alexa di mma nke ukwu.
Obunyi ulo oru ndia na-anu na-agba oso ahia amamighe echiche software. Baidu, nke ndi China nweputara na agba mbo. Igwe ohua di-egwu. Onye obula na agwa oso ya.
Ndi Igbo ga agba mbo otu anyi ga-esi nwebata amamige echiche software na Aba.na ala Igwo nile. Umu anyi mara akwukwo, nwere ufuru. Ndi na-achi achi kwesiriihu na ala Igbo gbara mbo n’ihe gbasara software. Oga enye umu anyi oru beke, webata mmepo obodo.
Filed in: Latest Insights | News Tags: AI, featured
8 thoughts on “Apple, Amazon, Google na agba oso okacha mma amamighe echiche software”
Java Prince May 28, 2017 at 3:46 PM · Edit
Nna Anyi ukwu Ndubuisi, obu board edemede gi enweghi mpkuru edemede Igbo zuru ezu?
Otutu mkpuru okwu ndia enweghi kpom kpom ebe ndi kwesiri nu.
ndubuisi ekekwe May 28, 2017 at 6:56 PM · Edit
Mba nu, odi mma. Ihe mere nu bu na keyboard komputa anaghi enyere m aka. Biko nyere umu nna gi aka ebe a.
Java Prince May 28, 2017 at 7:25 PM · Edit
Haha, android nwere ya,
ndubuisi ekekwe May 28, 2017 at 8:04 PM · Edit
Daal?. M ga-eji ya oge ?z?
Java Prince May 28, 2017 at 7:40 PM · Edit
Abum otu n’ime umu akwukwo ndi biara na ulo oru gi di na Owerri maka programming embedded nke eji PIC microcontroller kuzie.
Kemgbe ahu anom na eso blogu gi a.
Emerem nani Diploma nke ntakiri, agaghachibe m maka Diploma nke nnukwu na politekniki nihi ego.
On were ebe aga afaba nyem ka m nsoro ulo oru gi were na agbagote ma site kwa otu ahu nyere onwem aka?
Onwere ngbe m huru ihe dika oru unu na ewe maka saiba sekuriti nke bu maka umu akwukwo ka no na mahadum. Uche m di na oru ahu nke ukwu ma oburu na there ka di. Obu na Nekede ka m nobu neme diploma nke ntakiri. Ihenile gbasara gi na ulo oru gi na amasi m.
Enwekwaram blogu mana onaghi enyem ego obula, I nwere ike ile ya anya na http://www.Javaprince.com
Abukwam nwanne gi si kwe na God’s own state. Ndewo onye isi ma nke ana ako
ndubuisi ekekwe May 28, 2017 at 8:06 PM · Edit
Daal?. Ka any? jik?? na az?mah?a
Java Prince May 28, 2017 at 8:15 PM · Edit
I huru na osisa gi nke ikpeazu a e nweghi nke putara ofuma? ha na egosi akara ajuju.
Kedu email gi? ka m gwa gi otu iga esi deputa Igbo ofuma na Android
ndubuisi ekekwe May 28, 2017 at 8:22 PM · Edit